Menu mifono sy afeno Menubar: Afeno ny bara menio ao amin'ny Thunderbird | Avy amin'ny Linux
Ankoatry ny herin'izy ireo, izy roa Firefox como el Thunderbird manana zavatra izay nampiavaka azy ireo hafa foana izy ireo: fanitarana.
Amin'ity tranga ity dia asehoko anao ny fanitarana roa izay tena ilaina amiko (misaraka) satria izy ireo manampy ahy hahazo toerana avo eo amin'ny efijery miaraka amin'ny my Mpanjifa mailaka. Ny tanjon'izy roa dia ny manala na manafina ny bara fisakafoanana amin'ny toerany, satria farafaharatsiny zara raha mampiasa azy aho ary manangona toerana tsy ilaina.
1 Menu voafintina
2 Afeno i Menubar
Tiako ity fanitarana ity, indrindra satria azo namboarina. Ny zavatra ataony dia ataovy ao anaty bokotra mitambatra ny bao fisehon'ny menio, amin'ny fomba fanao Firefox. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manova ny kisary ary mametraka safidy hafa. Jereo ity sary manaraka ity, ny fomba nametrahako ny menio miaraka amin'ny kisary Thunderbird eo ankavanana ambony:
Afeno i Menubar
Nampiasa ity fanitarana ity nandritra ny fotoana ela aho Firefox ary ny zavatra ataony dia afeno ny bara menio, izay azontsika idirana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny lakile [Alt]. Na ahoana na ahoana, ny fanitarana dia manatanteraka tsara ny asany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Menu mifono sy afeno Menubar: Afeno ny bara menio ao amin'ny Thunderbird
Muuuuuuuuuuuuuuuuu misaotra betsaka ... nametraka fotsiny aho Menu voafintina ary io dia miasa amin'ny volo….
Tena tsara, satria ny firefox dia nivoaka niaraka tamin'ny safidy hanafenana ny baran'ny menio, tadiaviko io safidy io ihany tao anaty kotroka ary isaky ny fanavaozana dia tiako ampidirina izany, saingy mbola tsy nisy toy izany ... mandraka androany 😀
Nampiasa ny Compact Menu nandritra ny roa volana aho izao ary mandeha tsara. Ny tiako holazaina dia farafaharatsiny hitazonana ireo safidy rehetra tsy ampiasako tsy hitan'ny masoko ireo, haha.
Mampiasà an'i Hide Menubar aho hatramin'ny nanombohako nampiasa Thunderbird, zavatra tokony hotadiavinao ireo isaky ny piksela amin'ny habaka mitsangana dia mendrika volamena, fa ny efijery 10 ″ an'ny netbook dia tsy manome maridrefy xD
Tena ratsy fa niverina tamin'ny Evolution tamin'ny Debian ahy aho @@…
misaotra amin'ilay hevitra! mitady ny fomba hanitarana ny faritra azo ampiasaina amin'ny netbook, hitako ny hafatrao. Fa ny fananako ny thb 13 (Jona 2012) dia hitako fa amin'ny tsindrio fotsiny ny tsindry menio sy ny tsy fanamarinana ny Menu dia nanjavona ilay bara fiseholanana, miseho isaky ny manindry ny fanalahidy ALT aho ... Tsy nasiako ny extension extension HideMenu
dia misaotra amin'ny torohevitra!
Unsettings: fitaovana vaovao hanamboarana Unity